प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट, आज फाइनल : आर्मी र पुलिसको भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट, आज फाइनल : आर्मी र पुलिसको भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ?
Posted by Milap Subedi | २५ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ११:२३ |
२५ जेठ,काठमाडौँ । प्रथम प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा दुई विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबिच खेल हुँदै छ । खेल बिहान ९ बजेपछि त्रिवि मैदान कीर्तिपुरमा सुरु हुनेछ ।
फाइनल विजेताले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक पुरस्कार राशी अर्थात २० लाख रुपैयाँ पाउनेछ भने उपविजेताले १० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यसअघि ट्वेण्टी ट्वेण्टी क्रिकेटमा दुईपटक फाइनल खेल्दा पुलिस विजयी भएको थियो ।
तर यो प्रतियोगिता ५० ओभरको भएकाले दुवै टीमलाई आफू एकदिवसीयमा अब्बल प्रमाणित गर्ने मौका पनि हो । पुलिस क्लव मञ्जित श्रेष्ठ र आर्मी विनोद भण्डारीको कप्तानीमा मैदान उत्रिनेछ ।
त्रिभुवन आर्मी क्लबले सेमिफाइनल खेलमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई चार विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा आफनो स्थान सुरक्षित गरेको थियो । यस्तै नेपाल पुलिस क्लबले सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । देशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि भएको प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लब अपराजित छ ।
समूहचरणको खेलमा तीन खेल खेलेको आर्मीले तीन खेलमा नै जित हासिल गरेको थियो । पहिलो खेल पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रलाई ९ विकेटले पराजित गर्दै आर्मीले विजयी भएको थियो । यसैगरी आर्मीले सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई आठ विकेट र नेपाल पुलिस क्लबलाई सात विकेटले पराजित गरेको थियो ।
समूह चरणको खेलमा समान तीन खेल नै खेलेको नेपाल पुलिस क्लबले दुई खेलमा जित तथा एक खेलमा हार बेहोरेको थियो ।
पुलिसले सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई सात विकेट र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नौ विकेटले पराजित गरेका थिए । त्यस्तै समूह चरणमा पुलिस आर्मीसँग पराजित भएको थियो ।
Previous१२० जना सवार सैनिक विमान समुद्रमा दुर्घटनाग्रस्त
Nextहतियार प्रहार गरी एक बालिकाको हत्या : दिदीसहित चारजना नियन्त्रणमा
‘प्रधानमन्त्रीलाइ संसद् विघटनको अधिकार छ’
२ श्रावण २०७३, आईतवार ०७:१३
‘सभामुखको दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्छु’ : सभामुख महरा
२८ चैत्र २०७४, बुधबार १७:३२
‘चीन भ्रमणले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउँछ’ : प्रधानमन्त्री
१० चैत्र २०७३, बिहीबार १३:४४
पुर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा लिखित ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा’ पुस्तक लोकार्पण
१४ माघ २०७३, शुक्रबार १५:२३